Fiteny ordò - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Urdu)
Ny fiteny ordò ( اردو ) dia fiteny any Pakistana sy any India, mitovitovy be amin'ny fiteny hindy izy fa soratana amin'ny abidy arabo. Ny fiteny ordò dia isan'ny fiteny indô-eoropeana.
Misy olona 160 tapitrisa no miteny ordò eto an-tany. Misy 70 tapitrisa eo no miteny ordò hatramin'ny fahazazàny, (indrindra any India, satria isan'ny teny ofisialya ny India ny fiteny ordò).
Akaiky be amin'ny fiteny hindy ny fiteny ordò (hindūstāni ny anarany talohan'ny taona 1947; sahala amin'ny fiteny iray ny fiteny hindy sy ny fiteny ordò). Betsaka ny teny indramin'ny fiteny ordò amin'ny fiteny persana sy fiteny arabo, ary nanampy feo vaovao ireo fiteny ireo tao anatin'ny rafi-peony. Nanalavitra ny fiteny hindy ny fiteny ordò tamin'ny fisarahan'i India sy i Pakistana tamin'ny taona 1947.
Betsaka ny fiteny amin'ny fiteny ordò, toy ny foteny hindy, fitenenana Khariboli, Rekhta, Dakhini, Fiji Urdu, Awadhi, Haryanvi, sns.
Ny fiteny ordò no fiteny fahatelo ambin'ny folo na iraika ambin'ny folo lehibe indrindra eto an-tany.
Ny fiteny ordò, na dia iray amin'ireo fiteny vaovao eo amin'izao tontolo izao aza, dia manana ny mari-pahaizana mahazatra sy be dia be. Ny fiteny ordo dia malaza amin'ny tononkalony, indrindra amin'ny fiteny any Azia Atsimo.
2 Fiteny ordò any Pakistana
3 Fiteny ordò any India
4 Fifandraisan'ny fiteny ordò sy hindy
6 Fizaràna ara-toe-tany
Ny fiteny ordò dia karazana fiteny indiana toa ny fiteny hindy. Ity fiteny mpifindrafindra ity (ity fiteny ity dia fiteny Indiana afovoany, izay heverina ho fototry ny fiteny maro efa misy, ao anatin'izany ny fiteny ponjaby) dia avy amin'ny rajako hatramin'ny Atsinanana Akaiky (fahenina ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo taonjato).
Na dia avy amin'ny teny tiorka hoe orde (tafika, tafika) na orda ny teny hoe ordò, dia nitarika ny fisehoan'ny teny anglisy horde izy. Misy teny vitsivitsy amin'ny teny tiorka avy amin'ny teny ordò. رب Arabo, lasa teny persianina ny teny tiorka rehefa tonga any amin'ny fiteny oedo, satria matetika dia ovaina amin'ny teny arabo ny ة. Ohatra, ny co-ordinatera dite Arabo (ة) dia ovaina amin'ny (h) na (t).
Fiteny ordò any PakistanaHanova
Ny fiteny ordò no fiteny ofisialy any amin'ny faritany rehetra ao Pakistana. Ampianarina ho lohahevitra ilaina amin'ny madrassas mankany amin'ny kilasy ambaratonga faharoa izy. Namorona fitenim-pirenena ordò an-tapitrisany izay iray amin'ny teny Punjabi, Pashto, Sindhi, Baluchi, Kashmiri, Brahvi, Chitrali sns. Ny fiteny ordò no fiteny mitarika ao Pakistan ary mampiditra teny maro avy amin'ireo fiteny isam-paritra. Ity accent ordò ity dia antsoina hoe Pakistani Urdu ankehitriny. Manova ny hevitra momba ny fiteny Umar satria miteny ordò ny olona miteny ordò na dia tsy fiteny hafa aza ny fitenin-dreniny. Ny teny isam-paritra koa dia voataona amin'ny teny ordò. Misy olona an-tapitrisany ao Pakistan izay ny tenin-dreniny dia zavatra hafa kanefa afaka miresaka sy mahatakatra ny fiteny ordò.
Fiteny ordò any IndiaHanova
Any Inde, Urdu dia ampiasaina ary ampiasaina any amin'ny toerana nitoerana ny Minista vitsy an'isa na tanàna izay ivon'ny mpitondra silamo taloha. Anisan'izy ireo ny ampahany amin'ny Uttar Pradesh (indrindra fa Lucknow), Delhi, Bhopal, Hyderabad, Bangalore, Kolkata, Mysore, Patna, Ajmer ary Ahmedabad Bhatkal. Ny madrassas Indiana sasany mampianatra an'i Urdu ho fiteny voalohany, manana ny fandaharam-pianarana manokana sy ny fomba fanadinana izy ireo. Mampianatra amin'ny teny arabo sy Urdu ny seminera ara-pinoana Indiana. Ny isan'ny isan'ireo gazety Urdu any India dia mihoatra ny 35.
Fifandraisan'ny fiteny ordò sy hindyHanova
betsaka ny olona mety tsy mahalala fa ny Hindi dia tenim-paritr'i Urdu Alohan'ny fifidianana alohan'ny hamakiana ny fifidianana eto ambany.
Voalohany i Urdu dia teraka talohan'ny fahaleovan-tena tamin'izany, Hindi, tsy fiteny hafa amin'ny alàlan'ny script.
Tamin'ny vanim-potoana mughal sy anglisy dia nahalala ny soratra devnagari ny olona fa tsy ny fiteny Sanskrita >> avy eo dia Urdu no fiteny ofisialy amin'ny fanjakana maro anisan'izany ny bihar sy ny sasany hafa koa >>> ka ny fiteny iray izay tsy fantatry ny ankamaroan'ny indiana anglisy dia nosoratana tamin'ny script Nastaliq sy devnagari script ary tamin'ny taona 1988 dia nanova ny teny ofisialy Urdu ho Hindi Hindi i Bihar. Taorian'ny Fahaleovantena noho ny fandaharam-potoana politika dia nanova anarana ny Khadi boli ny olona izay tenim-pirenen'i Urdu mankany Hindi hifanerasera amin'ny hindoa ary hialana ny lasa.
Jereo ireo sarimihetsika Hindi taloha sasany izay nananany anaram-boninahitra niaraka tamin'ny script 2 misy ny devnagari sy Nastaliq
Ny olona eto dia milaza fa tsy ny fitenin'i Sanskrita, tsy noeritreretiko satria tsy fitsipiky ny Sanskrit izany fa tsy Persiana sy Arabo.
Ny adala masiaka tsy mbola mino an'io zavatra marina io.
Ary vitsy ny olona misaina fa ny fiteny Indo-eoropeana rehetra toa ny Bengali, marathi dia fitenin'ny hindi
Ny Hindi no loharanon'i Urdu. Raha ny marina, i Hindi dia nivoaka avy tao Urdu. Ny fahasamihafana dia ny fironana Hindi amin'ny Sanskrit dia avo be. Antsoina hoe Devanagari na Devanagari ny dikany.
Ny teny Hindi dia iray amin'ireo anarana taloha amin'ny fiteny Urdu. Ny dikan'io teny io dia ny Indiana na mifandraika amin'i India.
Ny Hindi dia natao avy any Urdu tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19. Araka ny politika ara-tsaina momba ny 'fizarazarana sy fanapahana', ny fiteny Hindi dia nanjary tamin'ny alàlan'ny fanesorana ny teny Urdu-Persianina tamin'ny Urdu ary nosoloiny ireo teny Sanskrit.
Nahita toerana tena nisy tao amin'ny literatiora tato ho ato ny literatiora Urdu nandritra ny taonjato maro, nandritra ny taonjato maro talohan'ny nifanjakan'i Persia an'i Delhi Delhi. I Urdu dia mora nosoloan'ny Persianina ary na ny olona aza misalasala fa ny Persiana mihitsy no fiteny ofisialy. Ny mpanoratra lehibe sy mpanakanto Urdu no tena antony.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_ordò&oldid=979611"
Dernière modification le 13 Janoary 2020, à 15:19
Voaova farany tamin'ny 13 Janoary 2020 amin'ny 15:19 ity pejy ity.